14 Julaị bu ubochi nke 14th (nke iri na anọ) na onwa ana kpo Julaị. Na Gregorian calender, 14 Julaị bu ubochi nke 195th (196th na afo nke ana-kpo leap year) na afo. Anyi nwere agugu ubochi 170 du mgbe afo na agwu.
26 Ọgọọst bu ubochi nke 26th (nke iri abụọ na ishii) na onwa ana kpo Ọgọọst. Na Gregorian calender, 26 Ọgọọst bu ubochi nke 238th (239th na afo nke ana-kpo leap year) na afo. Anyi nwere agugu ubochi 127 du mgbe afo na agwu.
8 Mee bu ubochi nke 8th (nke asatọ) na onwa ana kpo Mee. Na Gregorian calender, 8 Mee bu ubochi nke 128th (129th na afo nke ana-kpo leap year) na afo. Anyi nwere agugu ubochi 237 du mgbe afo na agwu.
A bu mkporo edeme ndi Igbo gi agu akwukwo ma obu ede akwukwo.
Asụsụ Inglish bu asụsụ ha na su na Europe na ebe ozor di na Uwa. Ha na su kwa ya na obodo Naigeria.
Coordinated Universal Time na bekee, (UTC), bu otu adi-iji amata ihe oge bu n'elu uwa nile. O bu taa ndi mmadu no n'uwa nwe ọtu ha nwere-ike ima oge ma mgbe ha gara ogbozo. Ndi International Atomic Time bu ndi n'eleekotawa machine nke n'emee oge uwa di mma.
France (asụsụ Fụrench: République française), nke ana-kpo kwa, Fụrench Ripọblik bụ otu obodo no na Obodo Békè.
Italy (asụsụ jéman: Repubblica Italiana), nke ana-kpo kwa, Italian Republic bụ otu obodo no na Obodo Békè.
Jémanị (asụsụ jéman: Bundesrepublik Deutschland), nke ana-kpo kwa, Federal Republic of Germany bụ otu ala ndi ocha no n'obodo ukwu adi-kpo Obodo Békè. Isi ya bụ Berlin.
Kroatia (asụsụ croatian: Republika Hrvatska), nke ana-kpo kwa, Republic of Kroatia bụ otu obodo no na Obodo Békè.
Naijiria (Naigeria, Naịjiria, Naijeria), ezigbo ogologo ahà ya bụ̀ Ọ̀hàn'ezènànchịkọ̀ Naijiria (Federal Republic of Nigeria nà bèkeè), bụ̀ òbòdò dị n'ime Eluàlà, Odi n'akuku odida anyanwu Afrika ana-akpo West Africa. Obu kwa obodo ndị Igbo, ma ndi Hausa na ndi Yoruba nakwa otutu ndi ozo di iche iche. Obodo a na-akpo Republic du Benin no na aka-ekpe Naijiria. Chad na Cameroon no kwa n'aka-nri ya. Na elu ya no obodo ana-kpo Niger. Okpuru ya ruru ebe mmiri a na-akpobu Bight of Biafra nke a gbanwere Gulf of Guinea di. Ebe ahu bukwa ebe mmiri ana-akpo Bight of Biafra di tupu a kpowa ya Bight of Bonny.
Njikọ̀taọ̀hà Amerika bu ala no n'ime obodo ukwu adi-kpo Olile anyanwu Amerika. Obu enyi Kánada ma ndi bekee (n'oge nka). Mgbe ufodu, ana kpo ya US, USA, na Amerika kwaa. Ndi bekee bu ndi bidoro ya na mgbe gara-aga, bụo Diạlạ Amerika bu ndi nola nga mbu. N'oge nka, obodo ahu bu ndi shi ike n'uwa.
Serbia (asụsụ serbian: Republika Srbija), nke ana-kpo kwa, Republic of Serbia bụ otu obodo no na Obodo Békè.
A wiki (Àtụ:Pron-en Àtụ:Respell) is a website that allows the easy creation and editing of any number of interlinked web pages via a web browser using a simplified markup language or a WYSIWYG text editor. Wikis are typically powered by wiki software and are often used to create collaborative websites, to power community websites, for personal note taking, in corporate intranets, and in knowledge management systems.
Ị̀ta ǹke mmụ̀zù Texas A&M
Ị̀ta ǹke mmụ̀zù Texas A&M (Texas A&M University), oke mmụ̀ta ǹke ìzìzì ọ́hà nà Texas, bìdòrò nà 1871 m̀gbè onye mụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè ǹkè Texas bidotọ̀rọ̀ kà mụ̀mìe m̀be-àlàọ̀chịchị si nà ìzùǹdeìwu Texas. okuzi bìdòrò nà 4 ọnwaìri afọ̀ 1876. Mà ọ bụkwa nà Texas A&M dị nà m̀bụ ị hàziri ị dị nà òkpurù ụmatọ Texas kà ànaka mmụ̀zu Texas ǹke ha bidòbèghị̀, ụme ǹkè ìzùǹdeìwu Texas è meghị̀ ị nye mmụ̀zù â ọdà nà ele isi Texas A&M. Nà afọ̀ 1875, ìzùǹdeìwu â wahàtọ̀rọ̀ ọ̀dìdo A&M nà mmụ̀zù Texas, ọdà ǹkè kara ị dị naanị nà akwụkwọ. mụ̀mìe mmụ̀taubì nà òrèrjè èbido nà ụ̀ma nà 2 ọnwaàsaà afọ̀ 1862.